ndiigbokwenu1, Author at NDỊ IGBO KWENU
Home / ndiigbokwenu1
January 26, 2017	Ala Igbo 0
Ndịbeanyị, anyị n’ekele unu oo! Biko anyị chọrọ ndị ga enyere anyị aka melite ohere-a ka ọ dị nma karịa otu ọ dị ugbua ma tọọ ụtọ. Site taa ruo na njedebe ọnwa Februari 2017, anyị ga na-anabata ndị chọrọ inyere anyị aka kwalite asụsụ na omenala igbo. Ọbụrụ na ...
Ndị beanyị ndewo nu ooo! Ndi Igbo Kwenu nọzi na Nkoli.com. Unu ma na Nkoli bụ ezigbo ohere nwanne anyị mepụtara iji chịkọta ndị obi ọma. Ọbụrụ na anyị bụ ndị Igbo nwere ike ịnọ na Facebook, Twitter, na LinkedIn ndị ọcha mepụtara, anyị kwesịrị ịchịkọ aka kwalite Nkoli nke ...
Onweghị ike ka ị nụrụ egwu Santy nwa mama ka ị harị ịnụ ofu ilu igbo kara aka n’ime ya. Santy ahaziela egwu ọhụrụ ọzọ ọ kpọrọ “Amara”. ZED bụ onye nyere aka mepụta nkiri ọmalịcha egwu. Igbo ka anyị jiri ofu obi biri bụ ozi ọ na ezipu n’egwu. ...
June 29, 2016	Column 0
Ụnyaahụ, ihe ọjọọ jọgburu onwe ya mere na Turkey. Ndị dị ka ndị ISIS tụrụ bọmbu na Ataturk Airport dị na Istanbul. Ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ meruru ahu. Anyị kwesịrị imepe anya anyị soro ndị ụwa nile hụ na ọnweghị Obodo ndị ogbu-mmadụ-a kwụnyere. Ọ bụ ...
April 11, 2016	23,132
May 10, 2016	5,381
May 6, 2016	3,172
May 5, 2016	3,057